LOHATENY DEHAVILLAND DHC8-Q 202 Package for FSX - Freeware
Ny Bombardier Dash 8 na Q Series, teo aloha fantatra amin'ny anarana hoe De Havilland Kanada Dash 8 na DHC-8, dia andian-dahatsoratra ny kambana-engined, mpanelanelana amin'ny tontolo isan-karazany, turboprop AN'HABAKABAKA. Nampidirina nataon'ireo Havilland Kanada (DHC) in 1984, izy ireo ankehitriny novokarin'ny Bombardier mpahay siansa. Mihoatra ny 1,000 Dash 8s rehetra modely efa naorina tamin'ny Bombardier forecasting tanteraka famokarana hazakazaka ny 1,192 vondrona rehetra variants hatramin'ny 2016.
Ny Series 100 dia manana fahafahana ambony indrindra ny 39, ny Series 200 manana fahafahana mitovy, fa manome fitaovana matanjaka kokoa.
Production ny Q200 sy Q300 andian nitsahatra tao 1998 sy ny Q400 ihany no vokarina ankehitriny fa jatony -100 sy -200 dikan-hitoetra ao amin'ny fanompoana manerana izao tontolo izao.
Dash rehetra 8s afaka amin'ny faharoa ampahefatry ny 1996 dia ahitana ny Active Noise sy ny hovitrovitra hampitsaharana ny (ANVS) rafitra natao mba hampihenana ny trano fialan-tsasatray tabataba sy ny hovitrovitra haavon'ny ho efa ho ireo ny fiaramanidina AN'HABAKABAKA. Mba hanantitranterana ny fiadanana, Bombardier anarana ny Dash 8 modely ho toy ny Q Series turboprops (Q200, Q300 sy Q400).
Complete fonosana miaraka amin'ny feo, VC de modely amin'ny Continental repaint, tena mahafinaritra ny manidina
Downloads 24 058
Noforonina 15 Jul 2010
Nohavaozina taminy 11 Jul 2012